XOG: Xildhibaanada taageersan madaxweyne Xasan oo saxiixay mooshin ka dhan ah R/wasaare Cabdiweli – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XOG: Xildhibaanada taageersan madaxweyne Xasan oo saxiixay mooshin ka dhan ah R/wasaare Cabdiweli
6th November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Warar goor dhow soo baxay ayaa sheegaya in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay mooshin ka dhan ah R/wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed u gudbiyeen gudoonka baarlamanka.
Si rasmi ah weli looma helin tirda xildhibaanada saxiixay mooshinkaas la doonayo in kalsoonida loogala noqdo xukuumadda R/wasaare Cabdiweli, hase ahaatee wararka qaara ayaa sheegaya iney tirada xidlhibaanadaas gaareyso ilaa boqol.
Markii uu si rasmi ah usoo shaac baxay khilaafka madaxweyne Xasan iyo R/wasaare Cabdweli ayaa xildhibaanada baarlamaanku la kala safteen labadan nin.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh oo maanta u ambabaxay Itoobiya ayaa waxaa madaxii sii sagootiyey ka mid ahaa R/wasaare Cabdi Weli oo ay si wanaagsan isu salaameen, inkasoo loo arkay mid aan niyadda jirin.
Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan danjire Nicholas Kay ayaa horay u sheegay inuu ka walaacsan yahay mooshin ka dhan ah R/wasaare Cabdiweli oo la diyaarinayo, isagoo xusay in xildhibaanada qaar codkooda lacaga loo badelanayo si ay u ridaan R/wasaraha.
Khilaafka madaxweynaha iyo R/wasaaraha ayaa si cad u qarxay kadib markii R/wasaare Cabdi Weli uu sameeyey isku shaandheyn Golaha Wasiirada ah, taasoo uu si cad u diiday madaxweyne Xasan.
Uganda oo shaqada ka joojisay 15 askari oo lagu eedeeyey iney kufsadeen dumar Soomaaliyeed